RIKOODHADII laga diiwaan geliyey shantii gool ee ay kooxda Chelsea ku xaaqday Everton oo marti u ahayd – Gool FM
(London) 05 Nof 2016 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hoggaanka horyaalka Ingiriiska ee Premier League si KMG ah u qabatay, kaddib markii ay 5-0 ku xaaqday Everton oo ay ku soo dhowaysay garoonkeeda Stamford Bridge.
Shanta gool oo ay ku adkaatay kooxda Chelsea kulanka ayaa waxa ay ka kala heshay Eden Hazard oo labo gool dhaliyey, Marcos Alonso, Diego Costa iyo Pedro Rodriguez.
>- Eden Hazard ayaa gool dhaliyey afar kulan oo xiriir ah horyaalka Premier League markii ugu horreysay xirfaddiisa ciyaareed.
>- Kaliya 70 ilbiriqsi ayaa u dhexeeyey goolkii koowaad iyo kii labaad ee Chelsea kulankan ay dhalisay.
>- Diego Costa ayaa ku lug lahaaday 12 gool waxa uu dhaliyey 9 gool isagoo caawiyey 3 gool oo kale, waana in ka badan ciyaaryahan waliba oo ka ciyaara Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Chelsea ayaan lagu tuurin kulankan hal shuut qeybta hore ee ciyaarta, taasoo ka dhigan in Blues aysan u ogolaanin koox kasoo horjeedda hal darbo ama hal shuut qaybihii hore ee ciyaarta markii ugu horreysay Horyaalka Ingiriiska tan iyo Janaayo 2013 kulankii Reading.
>- Chelsea ayaa guul gaartay shan ka mid ah lixdii kulan ee Premier League ay ku ciyaartay garoonkeeda xilli ciyaareedkan si la mid ah sidii ay yeeleen xilli ciyaareedkii 2015/16.
>- Everton ayaa laga dhaliyey shan gool horyaalka Premier League markii ugu horreysay tan iyo bishii Agoosto 2014, markaasoo isla Chelsea ay 6 gool ka dhalisay.
>- Chelsea ayaa guuldarro la’aan ah 21-kii kulan ee ugu dambeeyey oo horyaalka Premier League ay gurigeeda kula ciyaaray Everton, tan iyo bishii November sanadkii 1994-kii, markaasoo Everton ay ku adkaatay 1-0, tan iyo waqtigaas waxa ay badisay Bues 11 kulan iyadoo barbaro la gashay Everton 10 kulan oo kale.
>- Pedro ayaa sameeyey labo caawin kulan horyaalka ah gudihiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Abriil sanadkii 2012, markaasoo uu labo caawin ka sameeyey kulan dhexmaray Barcelona iyo Rayo Vallecano, waxaana Pedro uu xilligaas ka tirsanaa Barca.
>- Kooxda Chelsea hadda waa kooxda goolasha ugu badan xilli ciyaareedkan ka dhalisay horyaalka Premier League waxaa ay ka dhalisay 26 gool.